Ukukhiqiza - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Ukuthuthuka okuningi kwezobuchwepheshe kwenzeka kuphela ngemuva kokuthuthukiswa kukamazibuthe abanamandla amakhulu ngokweqile ezinhlotsheni nobukhulu obuhlukahlukene. Namuhla, izinto zikazibuthe zinezinto ezahluke kakhulu zikazibuthe nezomshini, ngakho-ke imindeni emine yamazibuthe waphakade ingasetshenziswa ezinhlotsheni eziningi kakhulu zezicelo.
I-RUMOTEK Magnet inesitoko esikhulu sikazibuthe waphakade ezinhlotsheni nakubukhulu obuningi obuhlukahluka ngohlelo lokusebenza lweklayenti, futhi ibuye inikeze odonsa abenziwe. Ngenxa yobungoti bethu emkhakheni wezinto kazibuthe kanye nozibuthe abasebenza unomphela, sithuthukise izinhlelo ezahlukahlukene zikazibuthe zezicelo zezimboni.
Iyini incazelo kamazibuthe?
Uzibuthe into ekwaziyo ukudala amandla kazibuthe. Onke odonsa kumele okungenani babe neNyakatho Pole eyodwa, neSouth Pole eyodwa.
Yini amandla kazibuthe?
Inkambu kazibuthe yindawo yesikhala lapho kukhona amandla kazibuthe atholakalayo. Amandla kazibuthe anamandla alinganayo nesiqondiso.
I-Magnetism isho amandla okuheha noma okunyanyekayo akhona phakathi kwezinto ezenziwe ngezinto ezithile ezifana ne-iron, i-nickel, i-cobalt nensimbi. La mandla akhona ngenxa yokunyakaza kwamanani kagesi ngaphakathi kwesakhiwo se-athomu salezi zinto.
Yini uzibuthe "waphakade"? Kwehluka kanjani lokho ku "elecromagnet"?
Uzibuthe onomphela uyaqhubeka nokukhipha amandla kazibuthe noma ungenawo umthombo wamandla, kanti i-electromagnet idinga amandla ukuze ikhiqize uzibuthe.
Uyini umehluko uzibuthe we-isotropic ne-anisotropic?
Uzibuthe we-isotropic awuqondisiwe ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ngakho-ke ungenziwa uzibuthe kunoma iyiphi indlela ngemuva kokuthi wenziwe. Ngokuphambene nalokho, uzibuthe we-anisotropic uvezwa kumandla kazibuthe aqinile ngesikhathi senqubo yokukhiqiza ukuqondisa izinhlayiya ohlangothini oluthile. Ngenxa yalokhu, odonsa be-anisotropic bangenziwa uzibuthe ohlangothini olulodwa; kodwa-ke ngokuvamile zinamandla amakhulu kazibuthe.
Yini echaza ukuphola kukazibuthe?
Uma ivunyelwe ukuhamba ngokukhululeka, uzibuthe uzozivumelanisa ne-polarity esenyakatho-ningizimu yomhlaba. Isigxobo esifuna eningizimu sibizwa ngokuthi "isigxobo saseningizimu" kanti isigxobo esikhomba enyakatho sibizwa ngokuthi "isigxobo esisenyakatho."
Alinganiswa kanjani amandla kazibuthe?
Amandla kazibuthe alinganiswa ngezindlela ezimbalwa ezihlukile. Nazi izibonelo ezimbalwa:
1) Imitha yeGauss isetshenziselwa ukukala amandla wensimu ekhishwa uzibuthe kumayunithi abizwa nge- "gauss."
2) Ukudonsa Abahloli kungasetshenziswa ukukala inani lesisindo uzibuthe ongaligcina ngamakhilogremu noma amakhilogremu.
3) Ama-permeameter asetshenziselwa ukukhomba izici eziqondile zikazibuthe zento ethile.